Mandoto | Martech Zone
Asabotsy, Septambra 29, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny zoma dia nifaly niaraka tamin'ny ekipa izahay tamin'ny mpanohana ny teknolojia,formstack , mifanakalo hevitra momba ny rindrambaiko madinidinika sy ny fitomboany ary ny fahombiazan'izy ireo ao amin'ny indostria. Ny resadresaka iray dia tena nahatsiravina ahy ary niresaka izanyformstack famerenanana indray.
Mba hanomezana background,formstack dia natomboka voalohany ho Formspring. Rehefa hitan'ny ekipa fa nanjary nalaza ny fitaovan'izy ireo tamin'ny fangatahana fanontaniana dia nandefa fitaovana ho an'izay izy ireo ary nomeny anarana Formspring, avy eo namerina namerina namidy ny fitaovan'izy ireo tany am-boalohany formstack. Forms spring dia namindra ny foibeny tany Silicon Valley aryformstack nijanona tany Indianapolis.
Amin'ny maha-naman'i Ade sy ny orinasany ahy, mino aho fa navoakako aza ny ahiahiko momba ilay fanovana sy ny fiantraikan'izany amin'ny fikarohana. Fa ny fanovana natao,formstack nanana a marika mafy orina noho ny ekipa ao amin'ny KA + A, ary faly ny habetsaky ny mpampiasa Formspring… ary toy izany koa ny Formspring izay niray hina tamin'ireo mpitarika ny fampiharana sosialy tao Silicon Valley. Ny zava-misy dia, na dia maharary aza, ny zavatra tsara indrindraformstack Ny nanao dia ny nandondona fotsiny ny tabataba, ny tsikera ary manohy manompo ireo mpanjifany.
Tamin'ny farany, dia niasa tsara… raha tsy tonga lafatra.formstack mitombo hatrany ary mitohy mijanona ho mailaka sy manavao - fandefasana a Dropbox fampidirana ao anatin'ny andro vitsivitsy izay hanapoaka ny fitomboany!
Tsy manafina ny resaka anatiny nataoko tamin'nyformstack tamin'izany fotoana izany, saingy azoko antoka fa nisy ny fahatezerana… ary koa ny fakam-panahy hiverina amin'ny fanapahan-kevitra. Rehefa miasa miaraka amina orinasa maro kokoa aho, dia mahatsikaritra toetra iray iraisana amin'ireo orinasa mahomby. izy ireo totohondry.
Ny tena izy dia indraindray tsy marina ny valalabemandry. Ary matetika, ny mpitsikera dia diso tanteraka. Ny bilaogera, mpanao gazety ary mpitsikera hafa dia mpanoratra ary matetika tsy manana fahombiazan'ny orinasan-dry zareo manokana hahafahany mahafeno fepetra hanomezana sosokevitra ny fomba fiasan'ny orinasa iray. Rehefa nanomboka aho Highbridge, Nijery sy nihaino ny olon-drehetra aho ary ny orinasako dia saika nifarana haingana araka ny nanombohany.
Raha tsy nanomboka niresaka tamin'ny olona nanana firaketana momba ny fandrosoan'ny orinasa mahomby aho dia nanomboka nitady ny fahitako ny momba ny orinasako mba hahombiazan'ny orinasako. Ny fihaonana niaraka tamin'i Chris Baggott, Kristian Andersen, Matt Nettleton, Harry Howe, David Castor, Todd Boyman, Adam Small, Doug Theis ary Michael Cloran dia nanome aingam-panahy hanomezam-boninahitra ahy. Nanova betsaka ny orinasako aho, namoy namana tsara tamin'izany, ary nihaino ireo mimonomonona tao amin'ilay faritra naminavina ny fahafatesako.
Saingy nokapohiko ilay izy.
Highbridge Amin'ny maha-orinasa ara-dalàna antsika dia nihoatra ny 2 taona ary manana mpiasa maharitra 6 izahay ary manangona mpanjifa marobe. Vao avy nanao sonia an'i Roche iraisam-pirenena izahay, nahavita ny tetikasanay voalohany ho an'ny VMware, ary manana mpanjifa mahatoky toa an'i Angie's List, Zmags, Mindjet, TinderBox, Delivra, Right On Interactive ary maro hafa. Manana mpanjifa hafa niverina izahay taorian'ny fampiharana mahomby… toa ny ChaCha, Webtrends, ary ny mpampindram-bola VA.
Mamely totohondry izahay.
Kely sy isan-karazany ny ekipanay, saingy mailaka izahay ary mahery setra avokoa mba hahazoana valiny. I Jennifer dia ampahany tsy tapaka amin'ny ekipanay izay mitazona ny zava-drehetra mihetsika, namoaka ny alina sy ny fahagagana i Stephen, i Marty dia loharanom-pahitana sy fanamby amin'ireo mpanjifanay, Nikhil dia manana fiheverana mahavariana amin'ny antsipiriany, ary i Nathan dia mpamorona kintana rock izay ho anarana amin'ny indostria indray andro any. Ny ekipanay rehetra dia misy zavatra itovizany - mamono totohondry izahay. Tsy mihaino ny mpomba anay izahay fa manamboatra ny lalanay manokana. Ny masoivohonay dia toy ny tsy misy hafa ary mampifangaro ny sasany amin'ireo mpanjifanay aza satria tsy niara-niasa tamin'ny orinasa toa anay izy ireo.
Atsaharo ny fihainoana ny besinimaro ary alao ny làlanao manokana. Hilaza aminao ny olona fa tsy afaka manao zavatra vitanao ianao. Manampy ny mpanjifa ny hevitra amin'ny mpanjifa momba ny vokatra sy serivisy… fa mety tsy hahasoa ny orinasanao. Ny mpanjifa sasany dia handratra ny orinasanao ary mila mianatra manary azy ireo ianao. Ny ankamaroan'ny olona dia misafidy ny làlana azo antoka fa tsy ny làlan-doza.
haino aman-jery sosialy Mety ho ny influencer ratsy indrindra teo amin'ny orinasa… ny vahoaka tsy manan-tsaina amin'ny ankapobeny, ny groupthink no salanisa - tsy ny ankanavaka. Raha te hahomby ianao dia tsy tokony hanaraka intsony ary tsy maintsy manomboka mitarika.
Tags: raharaham-barotraform springformstackzava-baovaoLeadership
29 Septambra 2012 à 4:34
Misaotra nizara ity Doug ity. Tena manakoako ahy izany ary lesona lehibe izany na inona na inona haben'ny orinasa iasanao. Arahabaina noho ny roa taona ihany koa!
29 Septambra 2012 à 4:40
Misaotra @jaschakaykaswolff:disqus ! Tsy isalasalana fa: ny fiovan'ny raharaham-barotra sy ny varotra amin'izao fotoana izao izay iainan'i Mindjet – tsy isalasalana fa miaraka aminao aho amin'ny fitarihana fa hotafihinao ary hanohy ny fanerena tsy an-kijanona izahay hanampy anao amin'izany. Ary koa, misaotra anao noho ny maha-aingam-panahy sy mpiara-miasa marina. Nanampy anay tamin'ny fanosehana anay ho amin'ny lalana tokony halehanay ianao ary tena antony lehibe amin'ny fitohizan'ny fitomboanay sy ny fahombiazanay.
30 Septambra 2012 à 12:12
Doug, misaotra anao nandray anay ary misaotra tamin'ny lahatsoratra manaraka. Afaka manome toky anareo aho fa nisy “korontana” kely tamin’izany andro izany. Mahavariana fa afaka manampy anao hahita tanjaka hanosehana ny fananana fampiharana matanjaka, mpanjifa mahafinaritra ary fitarihana mahay. Nahafinaritra ahy ny nijery anao nitombo DK New Media ary tsy nisalasala mihitsy na oviana na oviana ny zavatra azonao atao. Lehilahy iray mamono ekipa irery ianao, ary ankehitriny manana ekipa ianao dia tsy manantena afa-tsy ny tsara indrindra ho anao ry zalahy. Arahabaina noho ny firosoana sy ny fampitomboana ny orinasanao.